बैंकहरुको ब्याजदर सार्वजनिक कुनको कति ? – Online Bussiness Khabar
बैंकहरुको ब्याजदर सार्वजनिक कुनको कति ?
२०७७ माघ १, बिहीबार १६:१३
काठमाडौं, माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर धमाधम सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबारमात्रै एक दर्जन हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले लिने तथा आफूले दिने दुबै प्रकारका ब्याजदरहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
अर्को सनराइज बैंकले साधारण निक्षेपमा २ प्रतिशतदेखि मुद्दति निक्षेपमा ७ प्रतिशतसम्म दिने उल्लेख गरेको छ । घर कर्जामा १०.५० देखि ११.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने उल्लेख गरेको सनराइज बैंकले समग्रमा बेस रेटमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर लिने उल्लेख गरेको छ । यो बैंकको बेस रेट मंसिर मसान्तसम्म ७.२४ प्रतिशत रहेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले निक्षेपमा २ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने बताएको छ । कर्जातर्फ एभरेष्ट बैंकले बेस रेटमा १.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर दिने उल्लेख गरेको छ । एभरेष्टको मंसिर समान्तसम्म बेस रेट ६.५० प्रतिशत रहेको छ ।
बिहीबार बैंक अफ काठमाण्डूले पनि ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार साभारण निक्षेपमा २ प्रतिशतदेखि मुद्दति निक्षेपमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जातर्फ भने बैंक अफ काठमाण्डूले बेस रेटमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने बताएको छ । यस बैंकको मंसिर मसान्तसम्म ७.६७ प्रतिशत रहेको छ ।
बुधबार नै केहि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि आफ्नो ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले साधारण निक्षेपमा १.५० देखि ३ प्रतिशतसम्म र मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने बताएको छ । कर्जामा भने बैंकले बेस रेटमा २ देखि ५.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने उल्लेख गरेको छ । मुक्तिनाथको बेस रेट ८.७१ प्रतिशत रहेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले निक्षेपमा ३.५ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जातर्फ भने यस बैंकले आफ्नो बेस रेटमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने उल्लेख गरेको छ । सांग्रिलाको बेस रेट ८.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
ज्योति विकास बैंकले मुद्दति निक्षेपमा ८ प्रतिशतसम्म दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जातर्फ भने यस बैंकले बेस रेडमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने बताएको छ । माइक्रोफाइनान्स कर्जामा भने ७ प्रतिशतसम्म जोडेर लिने उल्लेख गरेको ज्योतिको बेस रेट ९.८६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक जारी